Indlela yokufunda nokuthumela imiyalezo - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ukuthumela umyalezo – isihloko soncedo
Indlela yokufunda nokuthumela imiyalezo
Yiya kwindawo ethi Imiyalezo uze ukhethe imiyalezo oyifumeneyo noyithumeleyo ofuna ukuyigcina
Ukuze ufunde imiyalezo egciniweyo, khetha ethi Incoko ezigciniweyo kwimenyu evelayo
Ukuze ugcine umyalezo, kuza kufuneka ungene Kwimiyalezo yakho ngekhompyutha. Indawo yokugcina ayifumaneki kwibhrawuza yefowuni okanye i-app ka-Airbnb.
Cofa kumyalezo ukuze ubone izinto onokuzikhetha, uze ucofe ethi Gcina
Ukuze ufunde imiyalezo egciniweyo, yiya kwimenyu yeMiyalezo yakho uze ucofe indawo ethi Gcina
Ukuba Ungumbuki Zindwendwe, funda okungakumbi ngendlela yokulawula imiyalezo yeendwendwe zakho.
Ukuqhakamshelana naBabuki Zindwendwe
Contacting Hosts is as simple as sending them a quick message on Airbnb to let them know you’re interested in their place or experience. For…
As long as you enter your destination, travel dates, and number of guests when searching on Airbnb, all listings that appear should be avail…
Ukuba kukho ingxaki xa ubhalisa xa ufika
Siyayiqonda. Uyakhathazeka xa ubhukishe indawo kuze kubekho into engekhoyo, engasebenziyo okanye nje ingabiyiyo le nto ubuyilindele xa ubhal…